एजेन्सीहरुको सहयोगमा एकराज पाठक प्रकाशित: २०७५-३-२४ गते | 1308 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानको एउटा बहुचर्चित तर विवादास्पद एजेण्डा थियो– मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल । उहाँले आफ्ना हरेक सम्बोधनमा भन्नुहुन्थ्यो, मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँछु तर त्यसको खर्च मेक्सिकोलाई नै तिराउँछु ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ओब्राडोरलाई आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमार्फत बधाई दिनुभएको छ । उहाँले मेक्सिकोको सो निर्वाचनलाई वैधानिक भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । दुई देशको यो कूटनीतिक अभ्यासकैबीचमा दुवै देशका विश्लेषकको प्रश्न भने जिवीतै छ– के सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बन्ला त ?
डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनौती दिँदै कच्चातेलको मुल्य चार वर्षयताकै उच्च, अब के गर्लान् ट्रम्प?
काठमाडौं । सोमबार कच्चातेलको मुल्य चार वर्षयताकै उच्च भएको छ । फ्रान्सको समाचार समिति एएफपीका अनुसार कच्चातेलको चार वर्षयताकै उच्च भएको हो । सोमबार कच्चा तेलको मुल्य ८१ डलर..
मालदीभ्समा विपक्ष नेता इब्राहिम विजयले चीनको सम्पदा ब्रह्मलुट योजना तुहियो
काठमाडाैं । माल्दीभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह माल्दीभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । मालदिभ्समा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति |अ..
अमेरिका : गोली काण्डमा एक नेपाली महिलासहित तीनको मृत्यु
वाशिङ्टन डिसी । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा भएको गोली काण्डमा एक नेपाली चेलीको हत्या भएको छ भने अर्का एक नेपाली घाइते भएका छन् । एक कम्पनीमा नै अल्पत्कालीन काम गर्न..
इस्लामावाद । भ्रष्टाचारको आरोपमा कारागारमा रहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई दिवंगत पत्नीको दाहसंस्कार गर्न अन्तरिम जमानतमा रिहा गरिएको सरकारी स्रोतले बताएको..